Xa Ubhaptizo ngo-2017 - iimpawu kunye nezithethe. Xa ubhukuda kwindawo yokuqhaqhaqha e-Icebha likaKristu, ixesha
Ngokuphambene neeholide ezininzi zeOthodoki ezibhiyozelwa kwiintsuku ezahlukeneyo zekhalenda, ubhaptizo luhlala lugujwa ngobusuku bukaJanuwari 18-19. Ubhaptizo luvala u-Eva weKrisimesi, kuqala ngokuza kweKrismesi. Ngaloo mini lidibanisa ezininzi izithethe kunye nemiqondiso, iinkolelo. Imbali ye-Epiphany (igama lesibili lomthendeleko wamaKristu) libuya emva kweminyaka engamawaka amabini. Ekuqaleni, lo mhla wawucingelwa ukuzalwa (iKrisimesi) kaYesu - kwakungenjalo, emanzini eMlambo iYordan, uThixo wabonakala kubantu abathathu. Ukususela ngeli xesha, kukholelwa ukuba amanzi ehlabathi lonke ahlanjululwe ngoJanuwari 19. Amakholwa kunye nabantu abangazange bahlambuluke bahlambe emgodini weqhwa-basuswa kwizono zabo baze baphile. Xa Ubhaptizo luka-2017 luza eRashiya, amaninzi amanqaba aya kuncwulwa ngabaphathiswa beecawa. Emva kwemithandazo kunye nokuhlanjululwa kwamanzi wonke umntu uya kumenywa ukuba angene kwiqhekeza eliqingqiweyo kwiqhwa. Abantwana banelisekile ukusela amanzi angcwele - akudingeki ukuba batyelele emanzini.
Xa Ubhaptizo luka-2017 lubhiyozelwa eRashiya. Imbali yobhaptizo lukaYesu Kristu
Ngomso kaJanuwari 19, 2017, emva kokuqala kwe-Epiphany eRussia, isihlwele esikhulu sabantu siya kubuthana kwiicawa zeOthodoki. Bonke baya kukhawuleza ukufumana ingcwele "yobhaptizo" yamanzi. Ngoko iRashiya iye yenzeka iminyaka engaphezu kwewaka. Leli holide liye lidala kakhulu - liyiminyaka engaphezu kwamawaka amabini. UYesu owayeneminyaka engamashumi amathathu ubudala, ephuma eNazarete, waya ngasezantsi, waya kuMlambo iYordan, kumntu olungileyo uJohn owayengummangaleli, owabhaptiza abantu ngelo xesha. UJohane wabiza ukuba abhaptizwe ngamanzi-guquka, uhlambulule ezonweni kwaye usondele ngakumbi kuThixo. Ilizwi latyhilwa kwilungisa eyamxelela indlela yokuhlukanisa uMsindisi efika kuye - ngokubonakala koMoya oyiNgcwele (ihobe) ehla phezu kwakhe ngexesha lokucwiliswa emanzini aseJordan. Ngethuba likaKrestu, umntu wonke wayeva ilizwi likaThixo, ebonisa uYesu njengonyana wakhe. Ngako oko, ibandla libiza ubhaptizo kunye noThixo. UThixo uNyana wazingcwalisa amanzi omhlaba wethu, ukuze onke amakholwa abhaptizwe kuwo.
Xa ubhukuda kwindawo yeqhwa e-Epiphany - Ixesha lokungena emngxeni weqhwa ngo-2017
Ngo-2017, i-Epiphany iwele ngoLwesine. Lo ngumhla osebenzayo, ngoko amakholwa afuna ukuphonsa emngxeni weqhwa ngamanzi ahlambulukileyo kufuneka avumelane nabasemagunyeni malunga nexesha elide ngaphambili. Ukuba awupheli emsebenzini ngoJanuwari 19, ungakhathazeki. Amanzi, afunyenwe kwi-Epiphany kunoma yimuphi umthombo, uthathwa njengonyango. Unokuya ethempelini nasemva komsebenzi, uthathe kunye nebhotile emanzini anikezelwe ukubhaptizwa. Ngokwesiko, ukungena emgodini kwi-Epiphany kufuneka kwenzeke kuphela emva kokungcwaliswa kwamanzi ngumbingeleli.
Kanye kunye neendawo zonqulo, uya kwindawo yokuhlala, apho "iJordani" inqunyulwa khona-umngxuma weqhwa ngohlobo lwesiphambano. Ukungcwalisa umgodi weqhwa, umbingeleli unxusa bonke abantu ukuba baqhube. Ukuvuma nokuguquka kwangaphambili ecaweni, amalungu enkolo ayena emanzini amanzi. Bathi ngisho nakwiindawo ezinqabileyo ezinqabileyo, abazalwana bahlamba emanzini angciniweyo ababamba ubanda kwaye abagula.
Iinkalo zabantu kunye nezithethe kwi-Epiphany. Yintoni enokuyenza nge-Epiphany 2017
Isithethe esisisiseko sokubhaptizwa sithengisa emngxeni weqhwa ngoJanuwari 19. Emva kokuba ingcwele ihlanjululwe, amakholwa anokulandela umzekelo kaYesu aze angene emanzini, ukuze ahlambulule izono zawo aze aphume emanzini acocekileyo kunye nomzimba nomphefumlo. Ngaphambi kwe-Epiphany, umntu akafanele atye ukutya kwezinto-ukutya akusixininisa kakhulu, kodwa kufuneka kugcinwe. Amakholwa alungiselela uKreshchensky uKhisimusi uEva ukwesaba; vumela ukusetyenziswa kweentlanzi eziliweyo, i-buckwheat, iklabishi kunye ne-vareniki yamazambane. I-omen efanelekileyo yeSibini yoBukuhlwa ngoLwesihlanu kuJanuwari 18 ithathwa ngokuba "ukuphatha isithwathwa." Ukwenza oku, umnini wendlu, ukuthayipha kwi-spoonful "yokutya okulambileyo" kuza efestile kwaye unikezela ngokunyamezela, esithi akazange aphule isivuno. Amanzi angcwele afunyenwe kumanzi, angcwaliswa ngumbingeleli, uphephe. Ususa ukugula, kwaye ungeze amandla. Ngokwesiko, yile manzi ukuba icawa iyabhalela ukuze ibe yinto engcwele kumakhaya abo, abantu, kwaneemoto kunye neendlela. Ngokomxholo, ukusuka kumtyholi nakwamanzi angcwele, umtyholi uyaphuma. Ngokomgaqo wobhaptizo, umntu kufuneka ahambe emzimbeni wamanzi aze aqokele amanzi angcwele kuyo yonke intsapho apho. Uyondliwa kubo bobabini abagulayo kunye nabantwana; Amanzi anjalo ahlamba ngamanxeba aze ahlanjwe. Ukuba ngumncinane kunye nomoya nomzimba. Yikholelwa ukuba umpompo wamanzi, ufunyenwe kwi-Epiphany ubusuku obungcwele-aluyinyaniso. Kuphela, ngokwenene, kunokuma ixesha elide ngaphandle kokuphazamiseka, kungabikho ukutshabalalisa, kugcinwe ukunambitheka kwayo kwangaphambili.
Esinye isithethe esimangalisayo esiphathelene nokubhaptizwa kukuvelisa amajuba ngexesha lokunqula iJordanian. Ijuba lifanekisela uMoya oyiNgcwele, wehla phezu kukaKristu ngexesha lokungena kwakhe eYordan, kunye nokuphela kweeholide zeKrisimesi.
Icawa ayicebisi iimpawu ze-Epiphany, nangona kunjalo, abaninzi bakholelwa ukuba akunakwenzeka ukuhlanza iimpahla kwiimilambo ngoJanuwari 19 - uSathana uya kubamba. Ukongeza, ngexesha leeholide zeKrisimesi, kuquka ukubhaptizwa ngokwawo, abafazi abafanelekanga ukuhamba amanzi. Ukuhlamba amantombazana ngeqhwa elichithweyo-ubuhle kunye nombala omhlophe. Mhlawumbi, lo mqondiso unencazelo yakhe - ukutshaya kwesikhumba ngeqhwa kubangela ukuphuphuma kwegazi esikhumbeni: amantombazana aphikisayo.
Amaphupha ukusuka ngomhla we-18 ukuya ku-19 kuJanuwari anesiprofeto. Yingakho wonke umntu uzama ukukhumbula oko ayeliphuphayo ngobusuku bo-Epiphany.
Abantu bakholelwa ukuba ukuchithwa kwekhephu ngoJanuwari 19 uthembisa isivuno esihle, ngelixa ilanga, ilanga elicacileyo libonisa okuchaseneyo.
Ngo-Epiphany 2017 kuhle ukwenza amalungiselelo, ukubhaptizwa, ukutshata nokuxoxa ngomtshato. Ukuba uceba ukuqhuba iingxoxo, khetha kwakhona le bhaptizo - uya kuba nethamsanqa.
Yintoni engenakwenziwa kwiNtlanganiso yoBhabhathiswa:
ukuba uhlanganyele emsebenzini wesiqhelo (udibanise, uhlambe, uhlambuluke, uhlambe);
NgoJanuwari 19 kubalulekile ukusela amanzi ahlambulukileyo kuphela, awukwazi ukuyidla amanzi anikezelweyo kunyaka ophelileyo, kuvunyelwe ukufefa igumbi, ukuhlamba okanye ukuhambisa iifili;
ubuxoki buyinto engavunyelwe yiZibhalo ezingcwele ngonaphakade. Kwimiba yobhaptizo inokubangela izifo zomlomo womlomo (umlomo omninzi, i-tonsillitis);
ukuhlambalaza nokuhlambalaza kuyaqatshelwa!
Iindidi eziphambili zokuzonwabisa
5 Izivuno ezidume kakhulu
Indlela yokucwangcisa ukuhamba kwakho okuzimeleyo
Ukuphulukisa iimpawu zepropolis
Kutheni ndibe ne-eyelashes ende?
I-Honeysuckle, inkcazo yeempawu zonyango
Iseshya sokuqala samkela izicelo zokuthatha inxaxheba kwixesha le-4 "Izwi. Abantwana »
U-Aquarius wesibini kunye no-Aquarius Umfo: Ukuhambelana
I-cockrant cocktail kunye neqanda
Pink okanye blue?